PKK oo loogu baaqay inay ka fogaadaan shacabka - BBC News Somali
PKK oo loogu baaqay inay ka fogaadaan shacabka
Image caption Diyaaradaha Turkiga waxa ay duqeynayaan xarumaha PKK ee Ciraaq
Maamul goboleedka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa waxa ay ku baaqayaan in kooxda kurdhishka ee PKK ay ciidamadooda iyo xarumahooda ka fogeeyaan meelaha dadka rayidka ay deggan yihiin si shacabka aysan dhibaato u soo gaarin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi, Mustapha Falah, ayaa sidoo kale cambaareeyay duqeymaha Turkiga, wuxuuna tilmaamay in shacab ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen duqeymaha gudaha Ciraaq laga geystay.
Laakiin afhayeen u hadlay PKK, oo lagu magacaabo, Zagros Hiwa, waxa uu BBC-da u sheegay in madaxweynaha Kurdiyiinta Ciraaq Massoud Barzani uu ogyahay, asigana uu fasaxay duqeymaha uu Turkiga ku hayo malleeshiyadooda.
Dowladda Kurdhiyiinta ee Ciraaq way beenisay arrintan. Waxa ay sheegeen in madaxweynaha lagu wargeliyay kaddib markii duqeynta ay dhacday.
Dowladda Turkiga ayaa weeraro dhanka hawada ah ku qaaday PKK, kaddib markii ay ku eedeysay inay halis ku yihiin Turkiga. Waxa uu sidoo kale weerarayaa Daacishta Suuriya.